Ibanga Duchesse de Nemours - peony engadini ngesiRashiya
Bayanda izingadi Russian ungabona izigqoko Milky-white enhle herbaceous peony zisetshenziswa nge igama exotic 'Duchesse de Nemours'. Peony lokhu libhekene njengoba isitshalo zokuhlobisa futhi izimbali, ukwakha isihlahla esikhulu bukhule engafinyelela kwengu-1 m ukuphakama. Ukuhlolisisa lokhu isiko, okuthandwayo yayo, ikakhulukazi ezobuchwepheshe wezolimo nokunakekela kunesidingo.
Peony 'Duchesse de Nemours': Incazelo
Florists ebucayi kule Ezikhula iminyaka eminingi omangalisayo, okuyinto akumangazi, kusukela ezingavamile engadini isitshalo ukuncintisana namanye brand ukukhuthazela, umhlobiso futhi ihlala isikhathi eside. Ngakho, ingabe Duchesse de Nemours - peony, isikhathi eside uhamba phambili e yokuthengisa eNetherlands imbali emakethe.
Okunhlobonhlobo medium izimbali, it yakha obukhulu izihlahlana esakaza oluhlaza amaqabunga amnyama amahle kanzima dissected kanye inflorescences okumnandi ezinkulu 16 cm ububanzi.
Peony Izimbali double, umqhele. Interesting umbala: omhlophe amacembe yangaphandle nge isizinda ngokulambisa lizwakale ogqamile, umqhele kuyinto obukhulu kakhulu umbala Milky-mhlophe. Izimbali sizibonise a ngephunga elimnandi fresh. Isikhathi izimbali izihlahlana - mayelana 18-20 izinsuku. Nokho, ifomu abacaphuni amahlamvu aminyene, esisogwini amahlumela eqinile basal, isekela nenhle ezihlabayo zokuhlobisa kuze kube sekupheleni kwesizini.
Ngenxa yalesi ezihlukahlukene libhekene ukuzinza empilweni vase ka izimbali qinani izindawo commercial ezinsukwini ezingu-10. The elingaphakathi ingadi isitshalo isetshenziswa landscape eqenjini lomculo futhi lihlala olulodwa.
Duchesse de Nemours - peony nge hardiness enviable futhi umthunzi-ukubekezela, kodwa izimbali zawo ziwukudla olukhulu ngokwengeziwe ngokwanele elikhanyayo ezindaweni. Shelter ebusika sezihlahla zidinga nentsha kuphela excellently ukubekezelela ubunzima ebusika. Lokhu grade undemanding ukuba isimo somhlabathi, kodwa uphumelele ezikhulayo loam evundile loam sandy. Zitshalwa icebo avundiswa inhlabathi okuxekethile, Duchesse de Nemours akudingi ukuvundiswa ezengeziwe Ukungeza kule minyaka 2-3 esilandelayo. Ngemva kokufika ukuchichima ngomnyaka wesithathu.
Ibanga okusakazwa kalula sokuhlukanisa ehlathini, okuyinto eyenziwa eduze Ekuqaleni autumn.
Pit bemba ngaphansi ukufika at ibanga 0.6-0.7 m, kusukela ehlathini peony patula. Umhlabathi uzilungiselele endaweni ekhethiwe kusengaphambili, futhi ukwenza ukumba up ngamunye imitha square ku 10 kg izinga organic - humus noma umquba, 50 g superfosfata.Razmery bendabuko kokwehla emgodini - 50x50. Ligcwele umhlabathi quarter avundiswa, yiba nalo delenki, uzama ukugcina ukukhula izinso awazange wangcwatshwa futhi kwasala ezingeni phansi. Uma lesi sifo hhayi wahlangana ngesikhathi kokwehla, lesi sitshalo kungenzeka eziqhakaza.
Duchesse de Nemours - Peony linesizotha, kodwa esabela ekunakekeleni izimbali ophana kakhulu. Ngu ebusika ngeziqu bafa cishe ngasesinqeni, kusale iziphunzi 2-3 cm, futhi mulching nge umquba noma Peat ehlathini.
Entwasahlobo nasehlobo, ehlathini kufanele uyophuziswa njalo, ukugxila izimo sezulu esifundeni. Ezinkathini ezomile humidification umfutho kwandisa. Ngezikhathi uhlele ziba ngcono inhlabathi futhi ususe ukhula.
Kusukela ngomnyaka wesithathu ka-ukuphila, peony wapha kabili ngesizini: entwasahlobo ngaphansi isihlahla wenze 2-3 kg humus, futhi ngemva zom - 30 g phosphorus-potassium fertilizer. Neziqu izitshalo abakwazi unqunywe ngaphambi kokuqala ekwindla, ngoba ngo-August simila uye wakwenza flower efihlekile.
Peony Duchesse de Nemours hola nenhlonipho phakathi balimi emazweni amaningi. Sihlanganisa inkimbinkimbi atehlukanisa nge engadini Akumangalisi okusezingeni eliphezulu zokuhlobisa yenkosi. Lokhu ezihlukahlukene, abaningi peonies ezimhlophe, izithombe okuyinto ekhishwa e emithonjeni ehlukene, kubalulekile ukubeka engadini yakho siqu.
Sekryty ingadi: zitshala rose in ekwindla
Ukutshala parsley, kungakangeni ubusika. parsley zokutshala isikhathi
I-Greek makeup, noma udale umfanekiso wesithikazikazi
Okusajingijolo utshwala ekhaya: Fast zokupheka ukudla
Kungani dream of a inyoni efile? Ubikezela ukuthi umbono esinjalo esidabukisayo?
Kuhle ubhontshisi kwabesifazane: ohlwini, umbhalo, kanye nokubuyekeza. toast Beautiful kowesifazane lokuzalwa
Indlela ukudlulisa imali VTB, Sberbank? Otolika akukho ikhomishana